Messi oo ka hadlay xaalada Barcelona iyadoo ay sii xoogeysaneyso wararka xanta ah ee suuqa kala iibsiga
Home Horyaalka Spain Messi oo ka hadlay xaalada Barcelona iyadoo ay sii xoogeysaneyso wararka xanta...
Xiddiga reer Argentine ayaa u furmay xaaladdiisa maskaxeed ee haatan ka dib markii uu soo maray “xilli aad u xun xagaaygii hore”
Lionel Messi ayaa ka hadlay xaaladiisa Barcelona xilli ay sii xoogeysanayaan wararka xanta ah ee suuqa kala iibsiga isagoo ku sii siqaya lixdii bilood ee ugu dambeysay qandaraaskiisa Camp Nou.
Messi ayaa ka nixiyay adduunka kubada cagta markii uu gudbiyay codsi rasmi ah oo ku saabsan kadib markii Barca ay 8-2 ku dubatay Bayern Munich xilli ciyaareedkii hore wareega 8da Champions League .
Manchester City , Inter iyo Paris Saint-Germain ayaa dhamaantood ku dagaalama saxiixa xiddiga reer Argentina ka dib markii uu muujiyay rabitaankiisa ah inuu ka tago kooxdiisa, lacagta lagu burburin karo qandaraaskiisa iyadoo loo marayo burofax, laakiin wuxuu si dhaqso leh u arkay wadadiisa bixitaankiisa oo ay xireen Blaugrana iyo saraakiisha La Liga .
33-sano jirkaan ayaa ugu danbeyn go’aansaday inuu sii joogo Camp Nou si looga fogaado dagaal kasoo baxay maxkamadda, isagoo sheegay in uu marna ka fiirsan doono inuu talaabo dhanka sharciga ah “kooxda aan jeclahay” wareysi qarxa gaar ah Goal ee bilowga Sebtember.
Messi ayaa sidoo kale hadafka qaatay maamulka kooxda Barca, isagoo ku eedeeyay madaxweynihii hore ee kooxda Josep Maria Bartomeu inuu ku guuldareystay inuu ka dhabeeyo balanqaadyadii uu ka sameeyay mustaqbalkiisa isla markaana uu kooxda ka caawiyo sidii ay ugu guuleysan lahaayeen Champions League.
Bartomeu ayaa iska casilay xilkiisa bil kadib cod kalsooni kala noqosho ah oo ku soo wajahan madaxiisa, kooxda ayaa tan iyo markii ay bilowday inay la timaado xilli cusub tababaraha kooxda Ronald Koeman – iyadoo doorashada soo socota ee madaxtinimada la qaban doono bisha Janaayo. .
Messi ayaa dib ugu soo laabtay doorkiisa kabtannimo ee Barca si aan kala sooc lahayn, isagoo dhaliyay goolkiisii ​​lixaad ee xilli ciyaareedkii 2020-21 ee La Liga ciyaartii ay barbaraha 2-2 la galeen Valencia Sabtidii wuxuu barbareeyay halyeeygii reer Brazil ee Pele oo hal koox muddo dheer haystay , oo leh 643 kulan oo laga diiwaan galiyay 748 kulan.
Sixiroolaha yar ayaa wali xor u ah inuu heshiis horudhac ah la galo cidkasta oo doonaysa marka uu furmo suuqa kala iibsiga jiilaalka, iyadoo PSG haatan loo arko inay tahay safka hore ee loolanka loogu jiro saxiixiisa.
Si kastaba ha noqotee, Goal ayaa soo warisay in Barca aysan wali helin dalab rasmi ah oo ku aadan Messi , kaasoo haatan sheegay inuu go’aansaday inuu ka caawiyo kooxda inay ka wada xaajoodaan marxaladda adag kadib markii ay soo martay waqtigii ugu fiicnaa ee xirfadiisa.
“Runta waxa ay tahay maanta waan fiicanahay, waa run inaan waqti aad u xun ku qaatay xagaayga,” ciyaaryahanka reer Argentina ayaa u sheegay La Sexta .
“Waxay ka timid kahor. Maxaa dhacay xagaaga kahor, sababta oo ah sida xilligu udhamaaday, burofax iyo waxaas oo dhan … Markaas ayaan xoogaa jiidayay bilowgii xilli ciyaareedka.
“Laakiin maanta waan fiicanahay waxaanan dareemayaa inaan si dhab ah ugu dagaallamayo wax kasta oo soo socda, waan faraxsanahay.
Waan ogahay in kooxdu ay marayso waqti adag, heer kooxeed iyo wax walba oo ku xeeran Barcelona, ​​laakiin waxaan rajaynayaa hormar wacan. ”
Messi ayaa ku soo laaban doona garoomada kooxda Barca marka ay u safraan Real Valladolid kulan ka tirsan La Liga habeenka Talaadada.
Previous articleChelses vs West Ham oo ciyaar xiiso leh ku dhex mari doonto garoonka Stamford Brigde…(Chelsea oo doonee in ay kusoo noqoto wadadii guusha)
Next articleWararka Xanta Suuqa kala iibsiga iyo Wargeysyada Yurub, Bissouma, Giroud, Salah, Mbappe, Alaba